Cloud of Luster Trano Fampakaram-Bady - Famolavolana
Trano Fampakaram-Bady Ny Cloud of luster dia trano fiangonana iray hita ao anaty efitrano fampakaram-bady ao an-tanànan'i Himeji, Japan. Miezaka mandika ny fanahy maoderina amin'ny toerana ara-batana ny endrika. Fotsy daholo ny trano fiangonana, endrika rahona mipetaka manodidina ny fitaratra mihoritra manokatra azy mankany amin'ny zaridaina sy ny faritry ny rano manodidina. Ny tsanganana dia natokana ho an'ny renivohitra hipetrika toy ny loha ka mampifandray azy ireo amin'ny valindrihana minimalistic. Ny socle kapel eo an-tsisin'ny kavoana dia fantsom-batana misy haingam-pandeha ahafahana mipoitra ny rafitra rehetra toy ny mitsingevana amin'ny rano ary manasongadina ny hamaizany.
Anaran'ny tetikasa : Cloud of Luster, Anaran'ny mpamorona : Tetsuya Matsumoto, Anaran'ny mpanjifa : 117 Group.
Trano Fampakaram-Bady Tetsuya Matsumoto Cloud of Luster